एविसीको छैठौ वार्षिक उत्सव – Rajmarg Online
एविसीको छैठौ वार्षिक उत्सव
घोराही १६ माघ । एबिसि एकेडेमी मन्टेस्वोरी स्कुल ले आफ्नो छैठौ वार्षिक उत्सव मनाएको छ । प्रत्येक वर्ष झै यसपाली पनि एबिसि एकेडेमीले बालबालिकाहरुका आमाबुवा तथा एकेडेमीका शिक्षकहरुलाई सम्मान गर्नुका साथै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कृत गरेको थियो ।
कार्यक्रममा बालबालिकाहरुले गीत गाउनुका साथै नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । एकेडेमीमा प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरुको सँख्या बढ्दै गएको छ भने दाङ्गका विभिन्न ठाउँहरुबाट विद्यार्थीहरु पढ्न आउने गरेको शिक्षिका ममता केसीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश न. ५ का सांसद अम्मर बहादुर डांगीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ्गका अध्यक्ष सबिन प्रियासन,घोराही उपमहानगरपलिका वडा न. १५ का अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
एबिसि एकेडेमीका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण एकेडेमीकी शिक्षिका ममता केसीले गर्नु भएको थियो ।